Farsamada Shiineeska Qalabka Soodejisa, Alaabta Keenta Makaanikada
Wiishka baaldiga taxanaha TDTG ee qaaliga ah waa mid ka mid ah xalalka ugu dhaqaalaha badan ee wax ka qabashada alaabta granular ama xumbada.Baaldiyadu waxay ku dhejiyaan suunka si toos ah si loo wareejiyo alaabta.Qalabka waxaa lagu quudiyaa mashiinka hoosta waxaana laga soo saaraa dusha sare.
Gaadhi-qaadiyaha silsiladda waxa uu ku qalabaysan yahay albaab xad dhaaf ah iyo beddelaad xaddidan.Albaabka buuxdhaafay ayaa lagu rakibay daaska si looga fogaado waxyeelada qalabka.Qalabka gargaarka qaraxa ayaa ku yaal qeybta madaxa ee mashiinka.
Mashiinnada daqiiqda ee TLSS-taxane tuubbo-qaade waxaa inta badan loo adeegsadaa quudinta tirada ee warshadda daqiiqda iyo mashiinka quudinta.
Mashiinka farsamaynta hadhuudhka ee caalamiga ah, mishiinkan gudbinta waxa si weyn loogu isticmaalay warshadaha wax soo saarka hadhuudhka, warshada korontada, dekedaha iyo munaasibadaha kale ee lagu gudbinayo granule, budada, buri ama bacaha, sida hadhuudhka, dhuxusha, macdanta, iyo wixii la mid ah.
Gaadhida suunka ayaa si weyn loogu dabaqay hadhuudhka, dhuxusha, macdanta, warshada korontada, dekedaha iyo goobo kale.
Albaabka Slide Slide Manual iyo Pneumatic
Buug-gacmeedka mishiinada daqiiqda iyo albaabada pneumatic-ka ayaa si weyn loogu isticmaalaa warshadda hadhuudhka iyo saliidda, warshadaynta quudinta, warshadda sibidhka, iyo warshadda kiimikada.